I-D-Bil TP ALP GGT-Umsebenzi weSibindiⅡ Indawo eKhawulezayo yokuKhangela uKuvavanya uKhathalelo-lweSinocare
I-D-Bil TP ALP GGT-Umsebenzi weSibindiⅡ Isixhobo esikhawulezayo seReagent
[imeyile ikhuselwe] I-Bilirubin ngqo / iyonke iProtein / iAlkaline Phosphatase / iGlutamyl Transferase Reagent Kit yenzelwe ukujonga ubungakanani be-bilirubin ngqo (DB) kunye neprotein (TP), kunye nomsebenzi of alkaline phosphatase (ALP) kunye ne-γ-glutamyl transferase (GGT) kwi-serum yabantu.
I-DB, ekwabizwa ngokuba yi-bilirubin edibeneyo, iveliswa xa i-bilirubin engathanga ngqo ingena esibindini kwaye idityaniswa ne-glucuronic acid phantsi kwesiphumo se-glucuronyl transferase. Ukuphakanyiswa kwe-DB kubonisa ukuba kukho ubunzima kwi-bilirubin ekufuneka ikhutshwe ngephepha le-biliary emva kokuphuma kwesibindi.
Ngokweklinikhi, i-TP ephezulu kunye ne-TP eyanciphileyo zombini zibalulekile. Uxinzelelo lwePlasma ngenxa yokuphulukana namanzi, okanye ukwanda kwemveliso yeprotheni ye-serum, kunokubangela uxinzelelo lweprotein iyonke ukuphakamisa; Ukwehla kweeprotheyini kungabangelwa yile: Ukuxutywa kweplasma ngenxa yokonyuka kwamanzi, ukungondleki okanye ukwanda kokusetyenziswa, imveliso encinci ngenxa yomonakalo wesibindi, okanye ilahleko yeprotein yeplasma.
I-ALP ikhona kwiintlobo ezahlukeneyo zezicubu zomzimba kuwo wonke umzimba womntu. Ukulinganiswa kwe-ALP kusetyenziselwa ikakhulu ukufumanisa isifo kunye nokubeka iliso kwizifo zesibindi, izifo zenyongo kunye nezifo ezinxulumene nethambo.
I-GGT kwi-serum ikakhulu ivela kwisibindi. Sisalathiso esibuthathaka sesifo sesibindi, njengoko i-GGT ephezulu ibonwa kwizifo zesibindi zezizathu ezahlukeneyo.
Inkqubo yokuphendula kwisigaba seLiquid, kusetyenziswa indlela yokuphela kwinqanaba kunye neendlela zendlela ekhokelela kwiziphumo ezichanekileyo
Iziphumo ziyafumaneka kwimizuzu eli-13
I-cartridge ezisebenzisayo kunye nokusetyenziswa kunye
I-DB / TP / ALP / GGT
I-DB: 1.0 ~ 260 µmol / L
I-ALP: 25 ~ 750 U / L
I-GGT: 10 ~ 450 U / L.